Kulankii 18, aad Ee Golaha Kabineega DDSI - Cakaara News
Kulankii 18, aad Ee Golaha Kabineega DDSI
Jigjiga(Cakaaranews) Sabti 16ka July 2016. Waxaa saaka hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha kafurmay kulankii 18, aad ee golaha kabineega DDSI ee caadiga ahaa.
Waxaana kulankan furay madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax islamarkaana Golaha soo hordhigtay si looga doodo loona ansixiyo ajandayaasha Kulankan oo ahaa: ansixinta bayaanka habraaca meelaynta shaqaalaha dawlada, ansixinta halbeega waxqabadka isu-dheelitiran (BSC) iyo ansixinta bayaanka dib u habaynta hanaanka cafiska ee DDSI.
Waxayna madaxwayne ku xigeenku faah-faahisay habraaca meelaynta shaqaalaha dawlada oo ah qaab-dhismeed midaynaya dhamaan shaqaalaha deegaanada dalka islamarkaana si cadaalad ah usimaya shaqada uu qofku qabto iyo mushaarkiisa. Madaxwayne ku xigeenka ayaa intaa kudaray in halbeega waxqabadka isu dheelitiran uu yahay barnaamij wax wayn kataraya nidaamka shaqada iyo shaqaalaha labadaba islamarkaana cabiraya waxqabadka shaqada uu qof waliba qabto isagoo islahaysiinaya shaqada laqabanayo iyo kharashka kubaxaya, meesha uu bayaanka dib uhabaynta hanaanka cafiskuna yahay bayaan horay ujiray balse dib uhabayn lagu sameeyay oo labalaadhiyay gudigiisii.
Kadibna wuxuu gurigu kadooday dhamaan ajandayaasha lasoo dhigay iyagoo ku salaynaya muhiimada balaadhan ee uu ajande kasta leeyahay. Waxayna dood iyo falanqayn dheer kadib goluhu codbuuxa ku ansixiyeen dhaqan-galinta dhamaan ajandayaasha sare ku xusan.
Ugudanbayna madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax ayaa kulankii 18, aad ee Golaha Kabineega DDSI ee caadiga ahaa halkaa kusoo afmeeray.